Galmudug oo ka warbixisay Wajiga labaad ee Shirka Dhuusamareeb – HalQaran.com
Galmudug oo ka warbixisay Wajiga labaad ee Shirka Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, Cali Daahir Ciid ayaa faah-faahin ka bixiyay Wajiga labaad ee Shirka dhawaan lagu wado in uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
Mr. Cali Daahir Ciid, ayaa tilmaamay, in Shirkaan diiradda lagu saari doono sidii xal buuxa looga gaari lahaa doorashooyinka iyo sidoo kale Xaaladdaha Amniga ee dalka.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug, ayaa sheegay in dhammaan ay kasoo qeyb gali doonaan Madaxda maamullada iyo kuwa dowladda Dhexe ee Soomaaliya, islamarkaana diiradda lagu saari doono sidii loo wajaheyn lahaa Xaaladda dalka.
Cali Daahir Ciid ayaa ka dhawaajiyay, in Galmudug ay ku guuleysatay in wajigii koowaad ee Shirkaan uu ku soo dhamaado si wanaagsan, islamarkaana waqtiga xiga ay dadaal badan ku bixin doonaan Sidii uu ugu soo dhammaan lahaa is afgarad.
Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa intooda badan hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Sidoo kale, waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu Dhuusamareeb gaaray Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Tags: Galmudug, shirka Dhuusamareeb, Wajiga labaad
Update:Dagaal beeleed Khasaare geystay oo ka dhacay Mudug
Lix sano jir walaashii ka difaacay eey oo 90 qodob laga tolay wejigiisa!